नेयमार वा एमबाप्पे मध्ये एकलाई अनुबन्ध गरिछाड्ने तयारीमा रियल मड्रिड - Medianp.com
सोमबार, ०६, असोज, २०७६
नेयमार वा एमबाप्पे मध्ये एकलाई अनुबन्ध गरिछाड्ने तयारीमा रियल मड्रिड
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००१:३१0
काठमाडौंः रियल मड्रिड सन् २०१३ देखि नै नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न चाहिरहेको छ । उक्त समयमा नेयमारले रियलको प्रस्ताव अस्किार गर्दै सान्टोसबाट बार्सिलोना आए । २०१७ मा बार्सिलोना छोडेर पिएसजी पुगेका उनलाई रियलले गत सिजन देखि नै पच्छाइरहेको छ । रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेज नेयमारलाई क्लबमा ल्याउँदा व्यापारिक हिसाबले समेत फाइदा हुने निष्कर्षमा छन् । तर, पछिल्लो समयमा नेयमारसँगै रियलको नजरमा एमबाप्पे समेत छन् ।
तर, पनि परेज पिएसजीसँग खेलाडी अनुबन्ध गर्नका लागि भिड्ने मनोस्थितीमा छैनन् । किनकी उनको सम्बन्ध पिएसजीका मालिक नासिर अल खेलाफीसँग राम्रो सम्बन्ध छ । सोही कारण रियल सही समयको प्रतिक्षामा रहेको स्पेनिस पत्रिका मार्काले जनाएको छ ।
रियलका लागि २०१८–१९ को सिजन निराशाजनक रह्यो ।
त्यसैलेपनि क्लबका समर्थक स्टार खेलाडी भित्र्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । मार्काका अनुसार अहिले विश्व फुटबलमा केवल दुई खेलाडी छन्, जसले रियलमा खुसी फर्काउन सक्छन् । ती खेलाडी अरु कोही नभएर नेयमार र एमबाप्पे हुन् । हालै एमबाप्पेले पिएसजी छोड्ने संकेत गरेका थिए । तर, पिएसजीले उनी क्लबमै रहने बताएको छ ।
रियल भने यो सिजन नेयमार वा एमबाप्पे मध्ये एकलाई भित्र्याएरै छोड्ने अभियानमा रहेको बताइएको छ । त्यसका लागि रियलले ३०० मिलियन यूरो खर्च गर्ने भएको छ । नेयमार वा एमबाप्पेलाई अनुबन्ध गर्ने शर्तमा रियलले आफ्ना खेलाडी दिन सक्नेछ । यी दुई खेलाडी मध्ये एकलाई अनुबन्ध गर्न सकिएको खण्डमा तुरुन्तै रणनीति परिवर्तन हुने र व्यवसायिकरुपमा समेत फाइदा हुने रियलको बुझाइ रहेको बताइन्छ ।
रोनाल्डोलाई मेस्सीले पछि पारे
विश्वलाई रुवाएका यी १० तस्बिरहरु ,जसले ढुङ्गाको मुटु भएको मन समेत पगाल्छ,हेर्नुस् (तस्विर)
शनिबार जन्मिनु भएको छ ? हेर्नुस् शनिवार जन्मिएको व्यक्तिहरु यस कारण हुन्छन् भाग्यमानी !
यी हुन् दैनिक डेढ लिटर पानी पिउने १४ महिनाकी अचम्मकी सानी बच्ची !
के हो यौन रोग ? महिलाहरुमा कस्ता किसिमका यौन रोगहरु देखा पर्दछ ?
कपाल किन झर्छ ? कस्तो बिरामीले कपाल प्रत्यारोपण गर्ने ?